Kismaayo News » Maraykanka oo Soomaaliya ugu deeqay lix gaari
Maraykanka oo Soomaaliya ugu deeqay lix gaari
Kn: Dawladda Maraykanka ayaa markii ugu horaysay tan iyo burburkii dawladdii dhexe ugu deeqday Soomaaliya gaadiidka loo isticmaalo meelaha aan nabaddu ka jirin ama aan xasiloonayn ee madaxda iyo saraakiishu ay ka cabsiqabaan in la bartilmaameedsado.
Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya ayaa lix baabuur oo ah nooca aan xabaddu karin ee gaadiidka raaxada kala wareegay saraakiil ka socotay dawladda Maraykanka. Deeqda Maraykanka oo u muuqatay madisho ma noolayso maadaama ay ahayd lix baabuur oo kaliya, waliba aan ahayn baabuurta dagaalka ayay aaminsanyihiin dadka u dhuun daloola siyaasadda geeska Afrika inay muujinayso inuusan wali Maraykanku daacad ka ahayn in Soomaaliya cagaheeda isku taagto.
Dawladda Soomaaliya ayay tahay inay danta dalka iyo dadka u kala xulato saaxiibada ay soo dhawaysan iyo kuwa ay liifadda u gaabin, waxaana muhiim ah in mar walba ay madaxda dalku maanka ku hayaan in walow ayno aynu meeqaam hoose caalamka ka joogno inay hadana tahay inaynu madaxeena kor u qaadno maadaama aynu haysano wax aan dalal badan oo caalamka aysan inala haysan, sida; Inaan nahay dad isku jaad ah oo caalamka intiisa kale ka duwan, lehna dhul qani ah oo waliba istaraatiiji ah. Caalamku asagaa inoo baahan in ka badan inta aan u baahannahay, laakiin waxaa hadii Eebe madaxdeena garansiiyo.